कहिले मिल्ने हाम्राहरू? - खबरम्यागजिन
Homeम्यागजिनकहिले मिल्ने हाम्राहरू?
कहिले मिल्ने हाम्राहरू?
March 17, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि म्यागजिन 0
बङ्गालले शोषण गऱ्यो । अन्याय गऱ्यो । अत्याचार गऱ्यो । गणतन्त्र छेक्यो । बोल्न दिएन । लेख्न दिएन। भाषा मेटाइदियो । हाम्राहरू मिल्नुपर्छ । मिल्नुलाई सबै तयार छन् । जनता तयार छ । राजनैतिक दल तयार छ । नेता/नेतृत्व तयार छ । फेरि किन मिल्दैनन् ।
विशाल राई , टिस्टा , कालेबुङ ।
It was the epic of believe
It was the epic of increduality
(Tales of two Cities -Charles Dickens-1859)
भर्खरै एउटा विवाहभोजमा एक क्रान्तिकारी मित्रले लामो भाषण हाने । कहिले मिल्ने हाम्राहरू । हाम्रो त नेताहरू नै भएन । यसपाली पनि मिल्ने सम्भावना देखिएन । यसपाली पनि मिल्न सकिएन भने यो जातिको अस्तित्व डाइनासोर हुनेछ । बङ्गालले हुनेहुनामी गरिसक्यो । हामी चोक्टा लाम्टा भयौँ । जात-जातको विकाश बोर्डमा विभक्त हामी । अब दार्जीलिङ पहाड सर्वनाश भयो ।
अब गोर्खा यहाँबाट खेदिने दिन आयो । यहाँ पनि मणिपुर , मेघालय , असम दोहोरिने छ । यो सब हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वहरू मिल्न नसकेर हो । उनी पहिले कुनै राजनैतिक दलसँग आबद्ध थिए । पछिबाट निराशा जोहो आफ्नै शिविरमा फर्किए । पहिले क्रान्तिकारी थिए । अहिले एकाध कविता कोर्छन् । अहिले वैरागी बने । उनको साहित्यिक उपनाम वैरागी ।
बङ्गालले शोषण गऱ्यो । अन्याय गऱ्यो । अत्याचार गऱ्यो । गणतन्त्र छेक्यो । बोल्न दिएन । लेख्न दिएन । भाषा मेटाइदियो । हाम्राहरू मिल्नुपर्छ । मिल्नुलाई सबै तयार छन् । जनता तयार छ । राजनैतिक दल तयार छ । नेता/नेतृत्व तयार छ । फेरि किन मिल्दैनन् ।
अचेल मलामी , विवाहघर , पूजा , विधालय , बजार , पार्क , सार्वजनिकदेखि लिएर बन्द कोठासम्मको साधरण चर्चा यहीँ छ । आन्दोलनपछि प्राय: सबै दार्शनिक बनेका छन् । दर्शकदेखि यसलाई उपलब्धि मान्नपर्छ । पहिले पहिले आफ्नो धारणा रोबिनसन क्रुसो हुँदा अल्पमतमा परेर दु:खी थिए । अहिले बहुमतको धारणा यहीँ छ । निराशा नै सही चिन्तनको आगो सबैतिर सल्किएको छ । पहिले पहिले सत्तामा खुट्टा हुँदा टाउका कुल्चिनेहरू अहिले टाउको जोगाउने दर्शन बाँडी हिँडिरहेका छन् । कुनै समय आम जनताको प्रजातन्त्र फोर्नेहरू अहिले प्रजातन्त्रको शोक मनाउन सङ्गोष्ठीमा भेला भएका छन् ।
राज्य तन्त्रको राजनीति र भोग विलास गर्ने दल र नेतृत्वहरू आमजनताका पीडादेखि अक्षुण्ण हुन्छन् । पीडा र चिन्तन उम्रिने भुँइ र उठ्ने घारणा समान हुँदा नै सहकारिताको वातावरणको निर्माण हुनेगर्छ । शोषण खप्ने एउटै समुहभित्र पनि दर्जा र अनुग्रहको बाँडफाड हुँदा त्यहीँभित्र प्रतिगामी शक्तिले जरा हाल्छ ।
त्यहीँ बोटमा पानी हालेर राज्य सत्ताले भविष्यमा पलाउने असन्तुष्टिको हत्या गर्छ । दार्जीलिङ पहाडको राजनैतिक इतिहासमा राज्य तन्त्रको खेल योभन्दा फरक छैन । एकसमयका जण्ड तार्किक , आलोचक , साहित्यकार रामकृष्ण शर्मा अखिल भारतीय गोर्खा लिगका तीक्ष्ण महासचिव थिए । शर्मालाई कलकत्ता उच्च न्यायालयको चौकीमा राज्य सरकारले बसाएपछि सम्भवत एउटा क्रान्ति ज्वालालाई पानी हालिदिए ।
भारतीय काङ्ग्रेसभित्र गोर्खा आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्ने टी मनेनलाई भारतीय काङ्ग्रेसको महासचिवको पदमा थान्को पारे । गोर्खालिगका मानिएका राजनैतिज्ञ देवप्रकाश राईलाई बङ्गाल काङ्ग्रेसको क्याबिनेटमा हुलाएर दार्जीलिङको आम गोर्खा चाहनादेखि विमुख गराए ।
सुभाष घिसिङलाई काउन्सिलको गणतान्त्रिक चुनाउको बाटो विपरित सालसम्म निर्विरोध दार्जीलिङको राजनैतिक बाघडोर हातमा दिए । आजीवन बङ्गाल राज्यसत्ताको पिउसे बनेर घिसिङले चाकरी गरे ।
मिल्ने सम्भावनाको यसरी हत्या हुनेगर्छ । चिन्तामा हाम्रो अनुहार एउटै छ । चिन्तनमा हामी अलग थलग छौँ । भूगोल एउटै छ । शोषक एउटै छ । इतिहास एउटै छ । पीडा एउटै छ । अगमसिंह , गोतामे , वैरागी काँइलाको एकै कविता पढेका छौँ । हाम्रो संवेदना भिन्ना भिन्नै छ । हामी कित्ता कित्तामा विभाजित छौँ ।
हाम्रो दलीय विविधता छ । तर वैचारिक विविधता छैन । दलदेखिमाथि हुन्छ विचार । दलीयताभन्दा वैचारिकता महान हुन्छ । सृजनशील हुन्छ । प्रजातन्त्र बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकमाथि चलायमान गर्ने शासन विधि हो । यो शासनको अन्तर्द्वन्द्व भनेको अल्पसंख्यकहरूको वैचारिक एकजुटता नै हो । बहुसंख्यक गोष्ठीभित्र पनि अन्तर्द्वन्द्व निहित हुन्छ ।
अल्पसंख्यक गोष्ठीभित्र चलिरहने दलीयताले गर्दा बहुसंख्यकको यो अन्तर्द्वन्द्व सतहमा देखा नपरेको हो । समयकालमा बहुसंख्यकको शोषण र शासन विधि नै वैचारिक संस्कृति बनेर निर्माण हुनेगर्छ । बङ्गाल सरकारको दार्जीलिङ पहाड र गोर्खा जातिमाथिको विविध शोषण अहिले यस क्षेत्रको संस्कृति बनेर निर्माण भइरहेको अवस्थामा छ । यसलाई आगामी पुस्ताले यस क्षेत्रको भूराजनैतिक अर्जित इतिहासको रूपमा पठन गरे खतरा तयहीँ देखिनेछ ।
तर हामीलाई अचेल केही कुराले छुँदैन । हामी यतिधेर संवेदनहीन बनिसकेका छौँ । संवेदनाको मृत्यु भनेको एउटा मान्छेको मृत्यु जस्तो झिना विषय होइन । मान्छेको संवेदना भनेको उसको इतिहास , भूगोल , भविष्यले निर्माण गर्ने विषय हुन् । संवेदनाको सिमा व्यक्ति , जाति, राष्ट्रको अस्तित्वसँग जोडिएको राजनीतिक विषय हुन । हामी यति धेर संवेदनहीन बनेका छौँ । हामीलाई अचेल केही कुराले छुँदैन ।
हाम्रो संवेदना राजनीतिक चुनाउसम्म सिमित छ । कि त आन्दोलनसम्म । जातिको माया , अस्तित्व रक्षाको प्रेम चुनावी विषय भइसक्यो। चुनाउमा हामी जाति प्रेमी हुन्छौँ । कि त आन्दोलनमा । कारण सोझो छ चुनाउ पाँच वर्षमा आउँनेगर्छ । आन्दोलन दल र सत्ता परिवर्तनपछि हुनेगर्छ । कि त दल र सत्तामोह स्थापनाको निम्ति । अरू सामन्य अवसरमा जातिप्रेमी भेटिन हम्मे हम्मे पर्छ । हामी दल दल हेरेर जाति प्रेमी छौँ । हामी झण्डा झण्डा जाति प्रेमी छौँ । हामी नेता नेता हेरेर बीर छौँ ।
चुनाउ सकिएको भोलीपल्ट हाम्रो जातिप्रेमको भ्यालिडिटि अफ् हुन्छ । रिचार्गको लागि अर्को चुनाउ पर्खिनुपर्छ । आन्दोलन थान्को लागेपछि हामी साधारण जनताभन्दा साधरण हुन्छौँ । राजनीतिक नदेखिनलाई सेतो लुगा लगाएर निधारमा टिका लगाएर प्रणामी हुन्छौँ । सुकिसकेको टिस्टा रङ्गीत सुक्दैन भन्नलाई अर्को आन्दोलन पर्खिएर बस्छौँ ।
नगरपालिका र विधानसभा चुनाउ पार्टी उम्मेद्वारले गोर्खाल्याण्डको नाममा चुनाउ जित्छ । ग्राम पंचायतदेखि काउन्सिलको चुनाउसम्म गोर्खाल्याण्डको नारामा जितिन्छ । नगरपालिका ,ग्राम पंचायत चुनाउ विकासको नाममा चुनाउ मैदानमा उत्रे उम्मेद्वारिता फरफिट हुने सम्भावना छ दार्जीलिङ पहाडमा । नाली झोडा , गल्ली , सडकपेटी , ल्याम्पोष्ट आदिको विकास गर्ने नगरपालिका र काउन्सिलको चुनाउलाई गोर्खाल्याण्डको चुनाउ भन्दा राजनीति हुँदैन ।
तर ग्रामीण विकास र आममानिसको संसाधनको विकासभन्दा जातिविरोधी र राजनीति हुन्छ । संसदमा आलुवाला , फेटावाला , फेरीवाला सांसदलाई सांसद भत्ता उकास्न पठाएका छौँ । हाम्रो रीतभात मेल नाखाने सांसदले गोर्खाल्याण्ड नबोल्दा राजनीति हुँदैन । किन नबोलेकोमा प्रश्न गर्दा राजनीति हुन्छ । राजनैतिक समाधानको मुद्धा अराजनैतिक संस्था र बुद्धिजीवीलाई सुम्पिएका छौँ । जुन राजनीति हो त्यसलाई अराजनैतिक सम्झिन्छौँ । जुन कुरा राजनीति हुनपर्ने त्यो सेवाको हिसाबमा चल्छ । जुन जनसेवा हुनपर्ने त्यो राजनीति छ । गर्नेहरूहरूले वर्षौदेखि राजनीति नै गरेका हुन् । गोर्खाल्याण्ड राजनीतिक समाधान हो भनेर बुझेनन् हाम्राहरूले । जे जे बुझे त्यसैलाई राजनीति पाए र प्रयोग गरे ।
घिसिङको समयमा आधुनिक हतियार लैस सीआरपीएफ विरूद्ध खदुवा चलाए । यता विमल गुरूङको समयमा जीएलपीले काटेका फलामको क्याटिसले बन्दुकको विरूद्ध बहादुरी देखाउने प्रयास गरे । लड्नेहरूले पुलिस र सीआरपीएफ विरूद्ध गोर्खाल्याण्डकै युद्ध लडेको ठाने । त्यतिलाई नै गोर्खाल्याण्डको युद्ध मानेर त्यसपछि राजनीतिक युद्धमा हारे । हारिरहे । आजसम्म हारिरहेका छन् । दार्जीलिङको सम्वेदनशील सिमाना क्षेत्रमा आन्दोलनको ग्राण्ड डिजाइन गर्ने घिसिङ र विमल गुरूङहरू पेरिफेरिमा बसेर राज्य र केन्द्रको राजनैतिक चलखेल ठम्याउन नसक्दा हारे । गोर्खाल्याण्डलाई राजनीति कम जनकेन्द्रीत आवेग मात्र मान्ने अल्पज्ञानी हुँदा थाकेर हारे ।
राजनीतिक दल र सत्ता फेर्न हामी रिप्पु छौँ । राजनीतिक परिवर्तनको हाँगामा पैसा सत्ता , मेला , सांस्कृतिक उत्सव र मोज हेर्ने हाम्रो आदत छ । आन्दोलन भनेको जुलुस र खुकुरी बुझेका छौँ । काट्नु , जलाउनु , मार्नु , भत्काउनु , बाटो अवरोध गर्नु , रूख विरूवाको तस्कर गर्नु , चन्दा सङ्ग्रह गर्नु , महङ्गो गाडी चढनु आदि आन्दोलनको यता संस्कृति बनिसकेको छ । काट्नु , जलाउनु , मार्नु , भत्काउनु , बाटो अवरोध गर्नु , रूख विरूवाको तस्कर गर्नु , चन्दा सङ्ग्रह गर्नु , महङ्गो गाडी चढ्नु आदि आन्दोलनको यता संस्कृति बनिसकेको छ । घिसिङदेखि विमल गुरूङसम्म यो संस्कृति स्थापित बनेर गयो । अहिलेको दार्जीलिङे युवा पुस्तामा आन्दोलनको यो संस्कृतिको विपरित फरक बाटो छैन ।
शहिदहरूको सपनाले हामीलाई छुँदैन। यो फरक कुरा हो कि दार्जीलिङ पहाडमा कोही मर्दा अचेल शहिदको सपना ट्रोल बनेको छ । नेता र दलको सोझो झुटले हामीलाई फरक पर्दैन । महाकाल राजनैतिक कसमको तीर्थ बनिसक्यो । गिता , कुराण ,बाइबल आदिको कसम खाने नेताहरू दार्जीलिङको मूलबाटो रातोबत्तीको गाडीमा प्रमोशन भए । कतिलाई कसम फापे । कति जंघार तरे। कसमले पिरोलिएर । व्यापारीहरू हाम्रा नेतृत्व छन् । पुँजीपति ठेकादारहरू हाम्रा उद्धारकर्ता छन् । हामी सजिलै भुल्छौं । पाँच वर्षभरि वन्चना सहनछौँ । लाञ्छना सहन्छौँ । पीडाले भकुरिन्छौँ। भोटको एकदिन हामी राजा हुन्छौँ । रहेको पाँच वर्ष माग्ने भिखारी हुन्छौँ । भोटको दिन हामी हाम्रो सोमालिया भुल्छौं । सडकको खाल्डा भुल्छौं । पानीविनाको नल भुल्छौं । सधैँ किनार किनार हिड्नुपर्ने अव्यवस्थित ढल भुल्छौं । विदेश कुइरेको घरमा भाँडा माझिरहेकी छोरी भुल्छौं । आन्दोलनले खाएको छोरा भुल्छौं । राजनैतिक अव्यवस्थाले पलायन हज्जार युवा दार्जीलिङ्गेहरूको काहालीलाग्दो अनुहार भुल्छौं । रोगी चियाबारी भुल्छौं । कुहनलागेको कुइलेनबारी भुल्छौं । अण्गन्ती निधारमा लागेको पुलिसको बन्दुकको गोली भुल्छौं । हज्जार सास्ती र चोटहरू भुल्छौं । भूल्नु पनि कति कति खतरनाक छ । त्यो पनि भुल्छौं ।
व्यवस्थालाई भक्कुचुर गालीगलौच गर्दै पाँच वर्ष बताउँछौँ । फेरि उही राजनैतिक दललाई बुढी औंलो दिएर चौकी दिन्छौँ । रहेको दिनहरू एउटै समस्या र चिन्ता बाँडफाँड गरेर खान्छौँ । सबैको गुनासो छ । हाम्राहरू कहिले मिल्ने ।
बालकृष्ण समले नियमित आकस्मिकता लेखे । पुस्तकको सार हो – संसारमा घटने घटनाहरू आकस्मिक हुँदैन । जुनै पनि घटनाहरू निर्दिष्ट नियमको क्रमबद्ध परिणाम हुन । हामी आकिस्मिक्तामा विश्वास गर्छौँ । हाम्रो आन्दोलन पनि आकिस्मिक्ताको खेल भयो । आकसमिक्ता नियमित हुँदैन । यस्तै आकस्मिक आन्दोलनहरूमा बेला बेला राजनैतिक एकता हुन्छ हाम्रो ।
नियमित र योजनावद्ध हुँदा हाम्रो एकता उभिन सक्दैन । यस्तै बेला बेला घटने आन्दोलनमा हुने एकता अरूबेला सामन्य अवस्थामा एकता कहिले देखिएन । यस्तै एकतालाई प्राण भर्ने अवसर राजनैतिक चुनाउ हो । जातीय एकता र जागरण पनि आकस्मिक्ता कै बजार भयो । तादीमा हिलम्यान एसोसिएसन , प्रान्त परिषद ,संयुक्त मोर्चा ,पीडीएफ ,ज्याक , जीएमसीसी , आदि यस्तै अनियमित आकस्मिक्ताको परिणाम थियो ।
नियमित र योजनाबद्ध आन्दोलनको खाँचोको बेला यस्ता मोर्चाहरू जलेर खरानीताल बनेका हुन् । सर्वभारतीय गोर्खालाई एकिकरण र राजनैतिक मञ्चको चेतना र जागरण दिने दार्जीलिङ मिलेर कहिले उभिनै सकेन । बोल्नै सकेन । आज पनि भारतीय स्तरमा गोर्खाहरूको राजनैतिक सङ्कट गम्भीर रूपमा अघि आइरहेको बेला दार्जीलिङ फेरि अर्को आकस्मिक्ताको प्रतिक्षामा छ । दार्जीलिङको निम्ति घिसिङ , विमल , मदन , छत्रे , आरबी ,हर्क सबै आकस्मिक्ता बाहेक केही प्रमाण भएन ।
आफ्नो भागको आपतकाल भोगिरहेको दार्जीलिङ फेरि अर्को घिसिङ र विमल पर्खेर निरिह देखिन्छ । भारतेली स्तरमा ६० देखि ८० सम्म कै दशकको जातीय आपतलाल र सङ्कट गोर्खाहरूले आज खप्न परिरहेको कठिन अवस्था छ । मेघालय , मणिपूर , असमतिर यो सङ्कट शुरू भैसकेको छ । ८० – को दशकमा दार्जीलिङ पहाडमा लागेको जातीय अस्तित्व र राजनैतिक सुरक्षाको आन्दोलनको आगोको पृष्ठभूमि त्यो पनि हो । सर्वभारतीय स्तरका गोर्खा सङ्गठन र बुद्धिजीवीहरू दार्जीलिङको आगो पर्खिएर उधिरहेको छ । उनीहरूको जातीय प्रेम र चेतना पनि दार्जीलिङमा आगो लाग्दा सल्किरहन्छ । दार्जीलिङमा आन्दोलनको आगो निभ्दा चिसो दार्जीलिङलाई गाली गरेर उनीहरूको जातीय दायित्व पुरा गर्छन् ।
दार्जीलिङले बुझेको र जानेको आन्दोलन ठीक विपरित छ । घिसिङ र विमल गुरूङले गरेको आन्दोलन नै दार्जीलिङलाई लाग्छ -आन्दोलन हो । बङ्गालपट्टि फ़र्केर चुनाउको मुखमा गाली गर्नु आन्दोलन हो । दार्जीलिङ , कालेबुङ , खरसाङ , मिरिकतिर जनसभामा गोर्खाल्याण्डको नाममा कसम खानु आन्दोलन हो ।
गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनको प्रभाव सिलगढीको समतल काटेर कोलकत्ता र दिल्लीको बन्द करिडरमा कहिले पुगेन । विगत वर्षको १०५ दिनको आन्दोलन अवधि दिल्ली भाजपा कुनै मन्त्रीलाई दार्जीलिङमा बन्दको ५६ दिन भएको जानकारी दिँदा उनले सोधे दार्जीलिङ कहाँ छ ? उनकै पार्टीको सांसद हाम्रो लोकसभा प्रतिनिधि हुन् । दार्जीलिङमा आन्दोलनको नाममा घिसिङदेखि विमलसम्म राजनैतिक हत्या , आगजनी , सरकारी कार्यालय तोडफोड , दोहन , बन्द , विपक्षी दलहरूको खेदुवा आदि विपरित संस्कृतिलाई लाई नै आन्दोलनको कार्यक्रम मानियो । जातीय भावना र आवेगको आधारमा विगत वर्ष भारत र विश्वभरकै गोर्खाहरूले नारा लगाएका थिए ।
तर आन्दोलनको केन्द्र स्थल दार्जीलिङमा भइरहेको आन्दोलन नेतृत्व र दिशाहीन पागल कुदिरहयो । गोर्खाल्याण्डको नाममा बन्द डाक्ने नेतृत्व र राजनैतिक दलले पछिबाट बन्दको जिम्मा जनतालाई बुझाए । यो आन्दोलनबाट पलायनकै चिन्ह थियो । शुरूमा बन्दको घोषणा गर्ने तर आपत आइपर्दा जिम्मेवारितादेखि भाग्ने काम भयो । विमल गुरूङले विनयलाई र विनयले विमललाई औंली देखाए ।
जीटीएको खेस्रा जलाएर शीरमा कफन बांधेर संगै निस्किएकाहरू हराए । एउटा जलाएको कागजको खरानी बोकेर लालकोठी हुँदै ब्रिगेडतिर लागे । अर्का आन्दोलनको नाममा आवेश छताछुल्ल पारेर सडकमा लाश र दार्जीलिङमा आवेशको आगो लगाएर सुइकुच्चा ठोके । यता दार्जीलिङमा राज्य र केन्द्र मिलेर आन्दोलनको आगोमा पानी हालेर चिसो पारे । उता भारतीय र विश्व गोर्खाहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा भर्त्सना र गाली लेखेर दायित्व पुरा गरे ।
गजब त आन्दोलनपछि देख्न पाइयो । बङ्गाल चिहान हो भन्नेहरू चिहानमा पाल टागेर रासोबासो बोकेर बस्न थाले । आन्दोलनमा जातीय स्वाभिमानको झण्डी हल्लाउनेहरू नेता फेरफार गर्दै बसाई सरे । कतिले लालकोठी होइन तर सोझै दादा र दीदीको ब्रिगेडतिर लागे । कति भूमिगतको नाममा जङ्गल र पहाडतिर कुदे । शुरू शुरूमा जीटीएको विरोध गर्दै जातीय स्वाभिमानको कसम खाँदै भूमिगत स्थलबाट अडियो पठाउनेहरूले महासचिव लगाएर ब्रिगेडतिर सुटुक्क सुटुक्क चिठी चपेटा लेख्न थाले। आफ्नो भागमा आन्दोलनको परिणति र नेतृत्व नरहेपछि कतिले सक्रिय सङ्घर्षको बाटो छाडेर राजीनामा दिए । साधु सन्तको जीवन बिताउने प्रण गरे । घर पसे । कति प्रणामी भए । भजन् किर्तनतिर लागे । कति शारिरीक जाँचको नाममा वेल्लोर , बेङ्गलोर , बम्बईतिर झरे । कति आन्दोलनमा जेल पसेकाहरू फिर्दै लालकोठी छिरे । । लालकोठीमा चढे । एकदुइ दिनमा हिमालय दर्पणमा फोटो देख्न पाइयो । विकास र शान्तिको निम्ति विनय गुटमा सामेल ।
उनीहरू विकाशको सेता परेवा बोकेर विमल गुरूङको अनुहार बेगरको झण्डा बोकेर शान्ति प्रचारमा देखिए । यसरी सामन्य अवस्थामा बाँच्न नसक्नेहरू भकाभक स्वाभिमान लिलामीमा देखिए । आन्दोलनमा जातीय प्रेम , स्वाभिमान भन्नेहरू आन्दोलन पछि मच्छड झैँ साइसुत्त हराए ।
राजनीतिमा मिल्नु र बाझ्नु पर्ने ठाउँ र ठहर हुन्छ । स्तर र अवस्था हुन्छ । गोर्खा हारेको यहीँ राजनैतिक चेतनाको अभावले हो । राज्य सरकारकै कानून अन्तर्गत जीटीए व्यवस्था अधिग्रहण मोर्चाले राज्य सरकारसँग कुटनैतिक सम्बन्ध राख्न सकेन । राज्य सरकारसँग मिलेर दार्जीलिङ पहाडको विकाश गर्ने भन्ने गोजमुमो-ले राज्य सरकारसँग राज्य सरकारसँग बाह्र हातको राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित गऱ्यो ।
राजनैतिक सम्बन्ध र कुटनैतिक सम्बन्ध भिन्ना भिन्नै कुरा रहेको नबुझ्दा विमल गुरूङको यो अवस्था भयो । जीटीए सन्चालन गरेर दार्जीलिङमा संसाधनहरूको विकाश , रोजगार आदिको विकाश गरेर सामाजिक , आर्थिक , राजनीतिक शक्तिको विकाश गर्नु पर्ने विषयमा चुके । राज्यसँगको जीटीए सम्झौतामा बसेर प्रशासनिक र क्षेत्रको विकासको माग पुरा गर्दै छुट्टै राज्यको निम्ति क्षेत्रीय राजनैतिक क्षमताको निर्माण गर्नु पर्ने दिशामा हारे । जुन बोडोहरूले बीटीसी अन्तर्गत गरिरहेका छन् । घिसिङले राज्यभित्रकै दागोपाप-मा बसेर २१ सालसम्म राज्य सरकारसँग सम्बन्ध राखेर दार्जीलिङको आमजनताको आवाज र जानाकांक्षालाई दबाएर राखे । घिसिङलाई दार्जीलिङे जनताको घेरादेखि बाहिर पारेर त्यहीँ बढ्दो जनाक्रोशलाई प्रयोग गरेर राज्य सरकारले घिसिङको विरूद्ध राजनैतिक अभियान रोपे ।
दार्जीलिङ पहाडमा विपक्षी राजनैतिक दलहरू , आमजनतामा थुप्रिएको जनाक्रोश नै घिसिङको शासनको पतन लेखियो । दार्जीलिङ र जनताको आवाजलाई किनारीकृत गरेकोले घिसिङ जनतासँग मिल्न सकेनन् । विमल गुरूङले राज्यसँग जीटीए सम्झौताभित्रको कुटनैतिक सम्बन्ध राखेर जनता र अन्य दलहरूसँगको जानाकांक्षासँग मिल्न पर्ने दिशामा फेल भए । घिसिङको राजसत्ता झारेर लामो ५ वर्षको सडकको आन्दोलन थेगेर प्राप्त जीटीएले जनताले कुनै राहत दिन भने सकेन ।
फलस्वरूप राज्य सरकारले दलीय विस्तार गर्ने राजनैतिक दिशातिर दार्जीलिङे जनताको आकर्षित भए । जुन थोक राज्यसँग छैन त्यहीँ थोकको लागि राज्यसँग बाझे । राज्यको क्षमताबाहिर रहेको थोकको निम्ति राज्य सरकारसँग बाझे । छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको सब्जेक्ट राज्यको होइन भन्ने जान्दा जान्दै राज्यसँग सिङ्गौरी खेलिरहे ।
छुट्टै राज्यको निम्ति केन्द्रको राजनीतिक स्तरमा जति काम गर्नु पर्ने दिल्लीतिर कहिले फर्किएर हेरेनन् । जो सँग बाझ्न पर्ने त्यहीँ चूपचाप लागे । दुइदुइपल्ट भारतीय जनता पार्टीको सांसद पठाउने दार्जीलिङले भाजपालाई कहिले प्रशन गरेनन् । दार्जीलिङको दीर्घकालीन समस्याको निम्ति संसदमा सांसदले कुनै दिन कुरा उठाएनन् । छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको कुरा छाडिदिउँ ।
कुनै दिन सांसदले दार्जीलिङको चियाखेती , सिन्कोना , बेरोजगारी , शिक्षा , केन्द्रीय विश्वविधालय , केही बोलेको सुनिएन । यहाँसम्म जीटीए-को सम्झौता बमोजिम राज्य सरकारले विभाग र क्षमताहरू हस्ताण्तरण नगरेकोमा केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेपको माग गरेनन् । तर भाजपासँग मिलिरहनु पर्ने राजनैतिक राजनैतिक वाध्यताले आन्दोलन गल्छीमा पस्यो । एउटा राजनैतिक दल र नेतृत्वको वाध्यता दार्जीलिङ र आन्दोलनकारी गोर्खा समुहको वाध्यता बन्यो । विगत आन्दोलन धरापमा पर्नुको कारण राज्य सरकारको दमनभन्दा बढी भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय र मध्यस्थताको भूमिका नरहनु पनि थियो । यसरी मिल्न र नमिल्न पर्ने ठाउँ नचिन्दा हामीपछि परयौँ ।
आगामी महिना लोकसभा चुनाउ छ । चुनाउलाई लिएर दार्जीलिङ पहाडका सम्पूर्ण राजनीतिक-अराजनीतिक दल कम्मर कसेर उभिएका छन् । सबैले राज्य सरकारपट्टि फर्किएर धमाधम गाली गर्दैछन् । दार्जीलिङ पहाडमा गणतन्त्र नरहेको गुनासाहरू देखिँदैछन् । यसबेला सम्पूर्ण राजनीतिक अराजनीतिक दल विशेषहरू एकजुटतामा आउन प्रयासमा छन् । राज्य सरकारले विगतमा आन्दोलन हिंसापूर्ण दमन गरेको , गणतन्त्रको हरण गरेको छ । केन्द्रीय सरकारमा रहेको भारतीय जनता पार्टीले दार्जीलिङमा ममता विरूद्ध आगो सल्काएर चूपचाप तमाशा हेरेर राजनीति गरेको छ । यसबेला दार्जीलिङको राजनीतिक धुर्वीकरण स्पष्ट छ । यतिदिनसम्म राज्य र केन्द्रको राजनैतिक दलहरूलाई विश्वास गरेर दार्जीलिङ पहाडले आफ़्नो बहुमुल्य जनमत दिएको हो । भारत स्वतन्त्रतादेखि हालसम्म विभिन्न राज्य र राष्ट्रीय राजनैतिक दलहरूलाई दार्जीलिङ लोकसभा समष्ठीबाट जिताएर पठाएको हो ।
कहिले काङ्ग्रेस , कहिले माकपा , कहिले भाजपा आदि विभिन्न राजनैतिक दलहरूको प्रार्थीहरूलाई दार्जीलिङ लोकसभाबाट बहुमूल्य जनमत दिएर पठाएको हो । तर हालसम्म भारतीय गोर्खा जाति र दार्जीलिङ पहाडको राजनैतिक , आर्थिक , सामाजिक अवस्था सुधारको निम्ति केही पहल भएन । भारतीय गोर्खा जातिको राष्ट्रीय अस्मिता र सुरक्षाको समस्या विषय लिएर कुनै सांसद र दलले चासो लिएन । चुनाउ अघिसम्म गोर्खाहरूको बहादुरीको वाहवाही गर्ने र चुनाउ जितेपछि उहीँ दलका सांसदले गोर्खाहरू नेपालका प्रवासी भनेर चुनावी तिरो तिर्छन् ।
भारत स्वतन्त्रतापछि लामो राजनैतिक सङ्घर्षको अनुभूतिले बताउँछ कि भारतीय गोर्खाहरू राजनीतिक क्षेत्रमा गाइनापिग भए । भारतीय गोर्खा जाति जुनदिन जुन दिन गोर्खा जातिले आफैमाथि विश्वास गर्न सिक्नेछन् , त्यहीँ दिन उन्मुक्तिको बाटो तय हुनेछ । अरूको भागको सामरिक युद्ध लडेर बहादुरीको संज्ञा बोक्ने गोर्खाहरू आफ्नो राजनैतिक युद्ध भने अरूको काँधमा चढाएर जहिले पनि हारेको छ । आफ्नो भागको युद्ध खेतालाले लड्दैन भन्ने विश्वासको कमी छ यो जातिमा । दोहोरो राज्य सत्ता खेपिरहेको तृणमूल काङ्ग्रेस पार्टी र दोस्रोपल्ट देशमा केन्द्रीय सत्ताको दौडमा लम्किरहेको भारतीय जनता पार्टीले पारेको राजनैतिक किनारीकॄत विरूद्ध
उभिन खोजिरहेको दार्जीलिङमा क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरू क्षेत्रीय राजनैतिक शक्तिको खोजीमा छन् । चुनाउ जति नजिक नजिक आइरहेछ , राजनैतिक एकतामा भ्वाङ देखापरिरहेछ । झिनो राजनैतिक शक्ति र क्षमताको अघि राजनैतिक विभक्त शक्ति देखापरिरहेछ । दल दलको झण्डा बोकेर ठूलो केन्द्रीय र राज्य शक्तिको अघि अघि लड्न सम्भव छैन । एकता र सामुहिक्ताको विकल्प छैन ।
जातीय उत्थान र सुरक्षाको अघि सबै राजनैतिक दलहरूमा दलीय स्वार्थको आगो सल्किरहेको छ । कहिले मिल्ने हाम्राहरू । लड्न सम्भव छैन । राज्य र केन्द्रीय राजनैतिक दल र सत्ताको भजन गाउँने हुतिहाराहरूको पनि कमी छैन । क्षेत्रीय दलीय एकताको आढमा राज्यीय र केन्द्रीय सत्ताको मुनाफा चाख्न कतिपय मिरजाफर शक्तिहरू प्रयासरत छन् । क्षेत्रीय राजनैतिक एकता र समवेततालाई छिन्नभिन्न पार्न राज्य र केन्द्रीय शक्तिका एजेण्टहरूको खेल कमी छैन । राज्यीय र केन्द्रीय शक्तिहरूको अघि क्षेत्रीय एकजुटता र एकरूपता कमजोर हुँदा नै आमजनताको आवाज निमुखा बनिरहेको छ । हालसम्म अलगथलग पारिएको क्षेत्रीय राजनैतिक एकता र शक्तिलाई दलीयता मात्र देख्नेहरूले चेतना र विमर्शको बाटो देखेका छैनन् ।
दलीयताकै बाटो मात्र हिड्ने झिनो राजनैतिक स्वार्थको कारण हालसम्म हाम्रो राजनैतिक चेतना राज्यीय र केन्द्रीय शक्तिको समानान्तर जहिले पनि झिना बनेका छन् । यतिबेला पनि दल दलको झण्डा र दलीय स्वार्थलाई माथि राखेर जातीय एकता र शक्तिको बाटोलाई मास्ने खेल शुरू हुने स्थिति छ । अब यो दलीय स्वार्थ मात्र होइन तर राजनीति जनताको विषय पनि हो भन्ने सामुहिक चेतनाको निर्माणको आवश्यकता रहेको छ ।
अमरसिंह राईकी श्रीमती बङ्गाली हुन्, सबै पक्ष विचार गरेर राईलाई उम्मेदवार बनाएका हौं-गौतम देव
मोर्चाको साङ्गठिक गतिविधि तीब्र: 35 नम्बर समष्टिका नारी अनि युवा मोर्चाको को-अर्डिनेसन कमिटी गठन
विमल गुरूङले भने, ‘तयारी बस्नु, म आउँदैछु’ : विमलको स्वागतमा लाखौं जनता सडक उत्रने (22,745)
पवारले दिए गृहमन्त्रीलाई त्रिपक्षीय वार्ताको दबाउ: केन्द्रले चाँड़ै वार्ताको प्रस्ताव दिनेछ: राजनाथ (18,731)